Iwo akanakisa mawebhusaiti ekucheka mavhidhiyo pamhepo mahara | Gadget nhau
Cheka mavhidhiyo epamhepo
Ignatius Room | | Vatambi, Software
Kuuya kwemafoni efoni pamusika uye sezvo tekinoroji yafambira mberi, nzira iyo yatinobata nayo ndangariro dzakanakisisa dzezuva redu nezuva yashanduka, dkusiya macompact kamera padivi pekushandisa kweiyo smartphone zvese nekutora mifananidzo nemavhidhiyo. Gore rega rega, iyo kamera yemafoni efoni inotipa zvirinani maficha, saka hazvisisina musoro kuramba tichishandisa macompact macamera kunze kwekunge ichitipa maficha atisingawane iye zvino mumafoni.
Kuwedzera chisarudzo chekamera zvinoita sekunge hachisiri chinhu chakakosha kune vagadziri, vari kutarisa kuwedzera mhando yemavhidhiyo. Asi kana isu tichida kugovana mavhidhiyo, zvinoenderana nehurefu hwavo, tinogona kumanikidzwa kuachekerera. Kune izvi, paInternet tinogona kuwana akasiyana webhu masevhisi anotibvumidza isu kuzviita nekukurumidza uye nyore. Pano tinokuratidza mashandisiro aunoita mavhidhiyo pamhepo tisingafanirwe kuisa chero chishandiso pakombuta yedu.
Semagariro mune mhando iyi yemasevhisi epamhepo, mune dzakawanda zviitiko zvakakosha kuti uve neAdobe Flash yakaiswa pakombuta yedu kana tichida kuzokwanisa kuwana masevhisi aya. Iyo chete webhusaiti kwatinofanira dhawunorodha yazvino vhezheni yeFlash ndeyeye mugadziri wayo, Adobe. Iwe haufanire kumisikidza vhezheni yeFlash, ndoda kushandura peji rewebhu rinotikurudzira kuti tidaro tichiti rapera. Flash inobatanidza iyo yekuvandudza system iyo inotizivisa kana pazvinofanirwa kuisa nyowani yekuvandudza iyi software.
1 Webhu Kucheka Vhidhiyo Pamhepo
Webhu Kucheka Vhidhiyo Pamhepo
Cheka Vhidhiyo Pamhepo inotipa chishandiso chisingotibvumidze chete kudzora vhidhiyo yedu kuitira kuti zvive nyore kuigovana, asi zvakare inotibvumidza tenderera kubva pamakumi mapfumbamwe kusvika makumi maviri neshanu, chesa chikamu chevhidhiyo kuti vhidhiyo yacho ive chinhu chakakurumbira, chekesa mavhidhiyo epamhepo kubva kuURL kana kubva kuGoogle Drive uye inoenderana nemafomati mazhinji aripo pamusika. Iyo saizi yepamusoro saizi iyo inotibvumidza isu kucheka inosvika mazana mashanu MB, huwandu hwakaringana zvinoenderana nemhando yatakanyora vhidhiyo iyi.
Kana tangoisa vhidhiyo iyi uye nekugadzirisa kwese kwatinobvumirwa neshoko, tinogona sarudza mhando uye fomati iyo yatiri kuda kurodha pasi, kuitira kuti tikwanise zvakare kushandisa Cheka Vhidhiyo Online kushandura mavhidhiyo edu kune mamwe mafomati tisina kuisa chero echitatu-bato kunyorera pakombuta yedu. Ehezve, iyo nguva ichatorwa nekushanda uku inoenderana nespidhi yekubatanidza yatawana chibvumirano.
AConvert Iyo haingotibvumidze chete kucheka edu avanofarira mavhidhiyo, asi zvakare iri sevhisi iyo inotibvumidzawo kuti tishandure iyo, cheka nzvimbo inonakidza kwazvo yevhidhiyo, mukuwedzera pakutibvumidza isu kuigovanisa mumavhidhiyo maviri kana anopfuura. Dambudziko nderekuti maitirwo ese atinofanira kuita takazvimiririra uye kwete pamwe chete sezvatingaite nebasa iri muchikamu chakapfuura. Kwete chete iyo inotibvumidza isu kuisa faira uye kucheka iyo, asi zvakare inotibvumidza isu kuisa URL uko iyo vhidhiyo yatinoda kucheka iripo uye kurodha pasi. Iri basa hazvidi kuti Adobe Flash ishande.
VideoToolbox ndeimwe yeakanakisa epamhepo masevhisi atinogona kuwana pa internet kana zvasvika pakucheka mavhidhiyo edu tisingafanirwe kurodha chero mhando yekushandisa. Iri basa inotibvumira kuisa mavhidhiyo anosvika mazana matanhatu MB mune mafomati anotevera: 3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, MPG, RM, VOB, WMV. Uye zvakare, inotibvumidzawo kutora iyo odhiyo uye kuwedzera imwe nyowani, kuwedzera zvinyorwa zvidiki, kutora mavhidhiyo, kushandura fomati yekodec, kuwedzera watermark, resolution uye zvine musoro kucheka chero chikamu chevhidhiyo kusiya chete icho chinofarira. isu kunyanya.
Iyo yepamhepo vhidhiyo mupepeti we kyoza, sevhisi inotipawo sevhisi yekugadzirisa mifananidzo pamhepo, inotibvumidza kucheka mavhidhiyo kuti tisiye chikamu chakakosha chete chevhidhiyo, asi zvakare inotibvumidza wedzera shanduko muchimiro chebhuku, kufamba, kupofumadza ... kana tine vhidhiyo inopfuura imwe chete mupepeti, tinogona zvakare kuwedzera mhedzisiro seye mafireworks, bokeh, swirl, glitters ...
Tinogona zvakare wedzera zvinyorwa, mifananidzo uye mumhanzi. Uye zvakare, uye kana izvo zvaive zvisina kukwana, isu tinogona zvakare kusanganisa ese ari maviri mapikicha nemavhidhiyo kuti tigadzire zvinoshamisa mavhidhiyo. Iko kushanda kweiyi online vhidhiyo yekushandira sevhisi iri nyore kwazvo, nekuti kuwedzera yega yega mhedzisiro isu tinongofanirwa kuvadhonza ivo kuenda kuchikamu chevhidhiyo patinoda kuisanganisira.
wincreator inotipa online vhidhiyo mupepeti watinogona kucheka chikamu chevhidhiyo iyo yatisingafarire. Iwo mafomati anoenderana ne .wmv, mp4, mpg, avi ... Iyi sevhisi Iyo inotipa isu kuganhurirwa kwe50 MB kana uchicheka mavhidhiyo, saka yakanaka kumavhidhiyo madiki uye kana isu tisingadi kuwedzera chero chimwe chiitiko, kuchichinjisa kana kucheka imwe nharaunda yevhidhiyo iri mubvunzo. Wincreator zvakare haidi Adobe Flash kuti icheke mavhidhiyo edu aunofarira.
Magisto inotipa imwe vhidhiyo mupepeti kupfuura zvakajairwa, nekuti zvinotibvumidza gadzirisa mavhidhiyo edu mumatanho matatu. Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kusarudza vhidhiyo kubva ku hard drive kana kubva kuaccount account kuGoogle Drive. Padanho rinotevera tinogona kucheka inonakidza nzvimbo yevhidhiyo uye kuwedzera dingindira rinonyatsokodzera zvatiri kutsvaga. Padanho rechitatu uye rekupedzisira, isu tinofanirwa kusarudza rwiyo ruchaperekedza vhidhiyo yedu. Kusiyana nemamwe masevhisi, kuti tishandise Magisto, isu tinofanirwa kunyoresa, kungave needu Facebook account kana kuburikidza neyedu account yeGmail. Izvo hazvidi kuti Adoble Flash ishande.
Con ClipChamp kwete chete isu tinogona kuisa chero vhidhiyo uye kuigadzirisa, asi isu zvakare tinogona rekodhi kuburikidza newebhu webcam yekomputa yedu. Kana zviri sarudzo dzakapihwa neClipChamp, isu tinowana mukana wekutora mavhidhiyo, kutsemura nzvimbo yechidzitiro, kutenderera vhidhiyo, kuibhenekesa, kana kugadzirisa kupenya uye kusiyanisa mazinga. SaMagisto, kuti tikwanise kushandisa sevhisi iyi, tinofanirwa kunyoresa kuburikidza neyedu Facebook kana account yeGmail, chimwe chinhu chinogona kudzoka zvakapfuura imwechete kuti tikwanise kushandisa sevhisi iyi. Izvo zvakare hazvidi Adobe Flash Player.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Vatambi » Cheka mavhidhiyo epamhepo
Chiitiko cheMadrid cheMitambo chinovhara nevashanyi vanopfuura zviuru zana
Iyo Kinde Oasis ichave inoenderana ne Inonzwika mune inotevera inodzokorora